Ama-Proteas Esifazane ahlulwe ngama-runs awu-51
Laura Wolvaardt of South Africa
u-Poonam Yadav ukhiphe abathathu ngama-runs awu-13 ukusiza i-India inqobe i-series ngama-runs awu-51 behlula ama-Proteas Women kumdlalo wesine we-T20 International e-Surat ngoLwesibili.
Umdlalo uncishiswe waba ama-overs awu-17 ngenxa yesimo sezulu, i-leg-spinner ibikwi-form enhle njengoba iqembu lasekhaya libeke izivakashi ku-89 kuphume abayisikhombisa bejaha u-141 e-Lalbhai Contractor Stadium.
Kube umdlalo wesibili ophelile kwimidlalo emihlanu kwi-series, futhi iqembu lanqoba omunye umdlalo, kusho ukuthi manje bangaphambili ngo-2-0 kuyela kumdlalo wokugcina ngoLwesihlanu.
Futhi bebekwizinga eliphezulu nakumdlalo abawunqobile, bashaya u-140 kuphume abane emuva kokuhlulwa kwi-toss kanye nokushayiswa kuqala u-Sune Luus, ukuqala komdlalo kuhlehlisiwe ngoba i-outfield ibimanzi.
u-Shafali Verma (46 off 33 balls) no-Jemimah Rodrigues (33 of 22 balls) bathole ama-runs amaningi kuma-Indians, basiza iqembu labo lithole ama-runs awu-8.23 nge-over.
Ushwibe kahle u-Nadine de Klerk ngokuthola u-2/24.
Ama-South Africans aqale kahle ngokufika ku-49 kuphume umuntu oyedwa futhi bafika ku-65 kuphume ababili nge-over yesi-11 ngoba u-Laura Wolvaardt (23 off 24 balls) no-Tazmin Brits (20 off 23 balls).
Kodwa bavithika ngesikhathi i-Player-of-the-Match u-Yadav ihlasela.
Ebesekelwe kahle u-Radha Yadav (2/16) njengoba izivakashi zigcine zilahlekelwe izinti zokugcina ezinhlanu ngama-runs awu-25, bahlulwa nakwi-series.
Note: All T20 matches to be played at Surat
October 9: 1st ODI
October 11: 2nd ODI
October 14: 3rd ODI
Note: All ODIs to be played at Baroda
Ama-Proteas aphumule futhi alungele uvivinyo u-Van Niekerk unqobise i-SA Emerging yabesifazane i-series u-Akter no-Sultana bashaye banqobisa i-Bangladesh Emerging yesifazane i-series i-Bangladesh ilinganisa i-series Yesifazane ye-Emerging u-De Klerk uhole njengesibonelo njengoba i-SA Emerging Yabesifazane izibeke ngaphambili ngo1-0 kwi-One-Day series u-Nadine de Klerk uzoba ukapteni weqembu labesifazane le-Emerging kuhambo lwasekhaya bedlala ne-Bangladesh i-CSA imemezele uhambo lwe- Bangladesh ne-Australia Ama-Proteas Esifazane agcine okuhle ekugcineni ukunqoba i-T20 series i-CSA ihalalisela ama-Proteas esifazane ngokunqoba i-T20I series u-Lee unqobela ama-Proteas esifazane i-series enodumo Ukuhlasela kwa-Lee kuhlela umdlalo ozocacisa nge-series